July 2019 - Boga Wise Man
Kala-Maan: Qaybta 5aad
Canab markii ay farriinta heshay waxa ay daawanaysay filin isla markiiba way u jawaabtay saaxibadeed “Good, horta saaxiibkaa miyaad soo kaxaynaysaa doodda?” Rooda markii ay fariinta heshay waxa isugu biiray naxdin iyo cadho wada socota. Waayo Canab ayaa xasuusisay inay wiil wada socdaan weliba u dadabtay inay fashilin karto oo ama wiilka ogeysiinayso ama labada […]
Hantiile Ka Noqo Dalkaaga Shaqaale Haka Noqon
Somaliland khayraad badan bay leedahay. Waanay horumari doontaa inshaAllah. Waxase muhiima in jiilalka dambe ee wadanka inaga dhaxli doona inaynaan kasii iibin dalka oo aynu ku sino. Aniga qolooyinka ila da’da ah iyo kuwa iga weyn da’ ahaan maanta waxa ka badan inta iga yar ee dhashay Somaliland oo nabad ah. Kawaran hadaba hadii jiilasha […]
Kala-Maan: Qaybtii 4aad
Odaygii: Waxaan rabnaa in aan ka guuleysano oo jebino dawlad isku sheega Somaliland. Daadir: Waxaan moodayay inaynu leenahay hanaga go’ina ee walaalayaal nala jooga waa maxay jebinta iyo guuldarrada aad la rabtaa? Odaygii: Adeer dadka lama rabno jab ee dawladooda ayaanu la rabnaa ee na fahan oo aduu waxaad u baahantahay noo sheeg cid kula […]
Kala-Maan: Qaybtii 3aad
Jimcaale isaga laftiisu habeenkaa hore umuu seexan. Wuxuu isku dayay inuu fahmo ninka ay loolamayaan. Waxaanu markiiba gartay khatarta ka iman karta hadii ay wadaagaan dood caadifadeed. Hadii Jimcaale lagu yidhaahdo wadajirka iyo kala taga keebaa lagu xoog-bataa oo kale waa qodob fudud balse muhiima. Jimcaale waxa kale oo dhiiri gelin gaar ah u noqotay […]
Kala-Maan: Qaybtii Labaad
Caweyskii wuxuu ku dhamaaday is afgarad iyo balan doodeed. Waxaana la is dhaafsaday telefanada, facebook-yada iyo twitteradaba. Mustafe iyo Jimcaale iyagoo weli fadhiya ayay baxeen gabdhihii iyo Daadir. Canab waxa ay damacday inay Roda fasaxdo oo iyada iyo Daadir isku hadhaan. Balse Daadir oo rabay inaanu wakhti lumin oo doodda kusoo foodle u diyaar garoobo […]
November 2019, London Jimcaale wuxuu soo fadhiistay ECN oo ah maqaaxi ku taala galbeedka London oo badanaa dhalinyarada Soomaalidu iskugu timaado caweyskii. Inkastoo aanu ahayn macmiil ama rukun todobaad kasta fadhiista maqaaxida hadana dhawrkii biloodba mar ayuu habeen uu sheeko iyo nasasho u baahanyahay tegi jiray maqaaxida. Jimcaale mashquulkiisa ayaa badan oo waxa uu bartaa […]
Beerta | Sheeko
Beertii Gabdhaha Caqliga Badan – Qaybtii 11aad (Dhamaad)
Evian waxa ay aamusiisay dadkii. Waxayna ku wargelisay inay su’aalo I weydiin karaan. Waxay dooratay gabadh dheer oo funaanad cad xidhnayd oo xaga dambe taagnayd. Evial: Leyla at the back (Layla oo xaga dambe taagan) Inantii Layla loogu yeedhay ayaa markiiba I weydiisay “Magacaa walaal?” Aniga: Wise Man Layla: Aan ku waramee walaal Wise Man-ow […]
Dugsiga Nolosha ee Kabriid
Anigoo goor casar liiq ah markaas soo maydhay oo madaxa saliid marsanaya ayaan maqlay telefankayga oo dhiiq-dhiiq leh. Maan jeclaysan inaan eego waayo maalintaas waxa ii qorsheysnaa in aanan waxkale qaban oon buug yar oon rabay inay qoro dejiyo shaxdiisa ka ahayn. Anoo raba inaan maya idhaahdo haday tahay cid wakhtigayga u baahan tahay ayaan […]
Saameynta Wareejinta Hantida Dawladu Ku Yeelato Midnimada Bulshada
Saamaynta Wareejinta Hantida Dawladu Ku Keento Wada-Jirka Bulshada. Dawladnimadu waa wax wada lahaansho iyo wax wada yeelasho ummadi leedahay. Wada-jirka ummaduna waxa laga dheehan karaa hadba sida ay ummadu u aaminsantahay inay wax wada leedahay. Bulshaba bulshada ay ka ogtahay inay wax wada leedahay ayay ka midaysantahay. Hadaba maxaa dhaca marka hanti iyo ilo dhaqaale […]
Haasawaha iyo Siyaasada
Siyaasadu dhinac marka laga eego waa haasaawe ama haasaawin uu siyaasigu bulshada ku haasawinayo kana dhaadhicinayo inay madax ka dhigtaan. Hadaba waxaan jeclaystay inaan tusaale inooga dhigo sheeko dhexmartay gabadh la odhan jiray Jennie Jerome oo dhashay Raysal Wasaarihii Ingiriiska ee wakhtigii dagaalka labaad ee adduunka Mr Winston Churcill, iyo laba nin oo jagada Raysal […]